Dhakhaatiirta UK waxay ku dhaleeceeyeen go'aanka ah in la qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 bishii Luulyo 19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Dhakhaatiirta UK waxay ku dhaleeceeyeen go'aanka ah in la qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 bishii Luulyo 19
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Anshax xumo iyo caqli xumo: Dhakhaatiirta UK waxay ku dhaleeceeyeen go'aanka ah in laga qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 bisha Luulyo 19
Dhakhaatiirta UK waxay ugu yeeraan Anshax xumo. Iyada oo tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ay si dhakhso leh u kordhayaan isla markaana aanu talaaladu wali siinin difaac xoolo, khubarada caafimaadka iyo sayniska ayaa ka digay in furitaanka England 19-kii July ay ahayd "dhicis".
Boqortooyada Midowday (UK) waxay ku jirtaa “xagaa fowdo iyo jahwareer” maadaama qorshaha furitaanka uusan “taxaddar” lahayn, ama “la xakamayn”.
Go'aanka furitaanka ee ra'iisul wasaare Boris Johnson waa mid "khatar ah oo dhicis ah", ayaa lagu yiri warqadda, iyo sidoo kale "anshax xumo iyo caqli xumo".
In ka badan 32,500 oo infekshan ah ayaa laga diiwaan geliyey 7dii Luulyo guud ahaan Boqortooyada Midowday - waana tiradii ugu badnayd ee waddanka soo marta tan iyo bishii Janaayo.
Warqad guud, cinwaankeedu yahay "Memorandum Against Mass Infection", in kabadan 100 dhakhaatiir British ah iyo saynisyahano caafimaad ayaa cambaareeyay UK Go'aankii dowladda ee ahaa in laga qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 ee England 19-kii Luulyo "anshax xumo".
Warqadda qalinka lagu duugay oo ay saxiixeen in ka badan 100 xirfadlayaal caafimaad ayaa shalay lagu daabacay qaybta waraaqaha ee joornaalka caafimaadka The Lancet.
Iyada oo tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ay si dhakhso leh u kordhayaan isla markaana aanu talaaladu wali siinin difaac xoolo, khubarada caafimaadka iyo sayniska ayaa ka digay in furitaanka England 19-kii July ay ahayd "dhicis".
In ka badan 32,500 oo infekshin ah ayaa laga diiwaan geliyey 7-dii Luulyo guud ahaan UK - tirada ugu sareysa dalka tan iyo bishii Janaayo.
Iyadoo la ogyahay in Boqortooyada Midowday ay hada la tacaaleyso kiisas cusub oo kusoo qulqulaya, go'aanka furitaanka Ra'iisul Wasaaraha Boris Johnson waa mid "khatar ah oo dhicis ah", ayay warqadu sheegtay, iyo sidoo kale "anshax xumo iyo caqli xumo".
Khaladku wuxuu daba socdaa hadal ka soo yeeray Xoghayaha Caafimaadka ee Boqortooyada Midowday ee dhawaan la magacaabay, Sajid Javid, oo faallo ka bixiyay maalmo uun ka hor in caabuqa xagaaga uu gaari karo 100,000 maalin kasta.
Warqadda ayaa sidoo kale ka digtay in kasta oo qayb weyn oo dadka ka mid ah la tallaalay, iyadoo 86.4% ay heleen qaadashadoodii ugu horreysay isla markaana ku dhowaad 65% si buuxda loo tallaalay, haddana tallaalka tallaalku weli lama gaarin, mana dhici doono illaa Juulaay 19. khataraha 'COVID dheer' ee bukaanku ku xanuunsan karo fayraska kadib. Long COVID waa xaalad ay bukaanjiifka coronavirus qaarkood ay la kulmaan markii uu kudhacay infekshanka asalka ah waxayna u muuqan karaan dhibaato xagga neefsashada ah, ur iyo dhadhan la'aan, iyo daal la'aan.